Antsohihy : Rava ny fikasana hanakorontana -
AccueilRaharaham-pirenenaAntsohihy : Rava ny fikasana hanakorontana
Leo korontana, izahay, hoy ny fanambaran’ny solontenan’ny vahoakan’Antsohihy, omaly, momba ny toe-java-nisy tany an-toerana. Misy andian’olona mampirisika avy hatrany hikorontana mantsy raha vao nisy an’iny trangana fanafihana Mompera iny. “ Gaga izahay fa ny fisavorovoroana avy hatrany no tanjon’ireto andian’olona ireto. Nasaina nivoaka ny trano haneho tsy fahafaliana momba ny tsy fandriam-pahalemana izahay”, hoy hatrany ny fanazavana.
Na dia nanao izay ho afany aza ireo mpampirisika, dia tsy naharototra ireo vahoaka izany. Tsy azon’ireo mpanakorontana ny mponin’Antsohihy tamin’io. Nisy avy hatrany mantsy ny feo nandeha, afakomaly, fa tsy havela hiditra an-tsehatra hanohy ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana. Notondroina ho mpiray tsikombakomba tamin’ny olon-dratsy mihitsy mantsy izy ireo.
“Mahagaga anay fa misy mamorona tsaho hafahafa entina hampisavorovoro anay fokonolona foana”, hoy hatrany ny fanazavan’ity solontenan’ny mponin’Antsohihy ity. Nijoro anefa ireo mpitandro filaminana ary nisy avy hatrany ny fisamborana an’ireo olon-dratsy namono an’ilay Mompera, ka olona miisa 13 no efa tra-tehaka. Efa voafehy ny fandriam-pahalemana amin’izao fotoana ao Antsohihy. Efa fantampatatra avokoa ireo andian’olona ireo, izay tsy iza fa miray tendro amin’ny mpanao politika tsy maty voalavo an-kibo amin’ny fanakorontanana hatraty Antananarivo.
Tanan’ireo mpanao politika manana firehana amin’ny fanoherana tokoa Antsohihy ka tsy mahagaga raha maro ny mpikopaka afo amina tranga iray mety hanentanana olona hisavorovoro. Tany tan-dalàna anefa isika, ka mandray ny andraikiny avy hatrany ny mpitandro filaminana misambotra ny olon-dratsy sy mampandry fahalemana.